सारङ्गी संरक्षण गरौं - Pradesh Today
Homeसम्पादकीयसारङ्गी संरक्षण गरौं
सारङ्गी संरक्षण गरौं
नेपालमा प्रचलित सारङ्गी, मादल लगायतका लोकबाजा निकै लोकप्रिय बाजा हुन् । नेपाली मौलिक कला, संस्कृति बोकेको सारङ्गी, मादललगायतका बाजाहरू विभिन्न कारणले लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
ति लोकबाजाको धुन सुन्ने पुस्ताको कमि नभएपनि बजाउने र संरक्षण गर्ने पुस्ताको कमि देखिएको छ । बाजाको संरक्षण गरिरहेको गन्धर्व समुदाय र वादी समुदायमा पछिल्लो पुस्ताले निरन्तरता दिन सकिरहेको छैन् ।
नेपाली कला, संस्कृति बोकेको सारङ्गी बजाउने पुस्ता र बनाउने पुस्ता हराउँदै गएको छ भने सीप मेटिदै गएको छ । सारङ्गीको संरक्षणमा पुरानो पुस्ताले मात्रै चासो दिएको देखिन्छ ।
अब युवा पुस्तालाई पनि यो अभियानका लगाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । पुरानो पुस्ताले सारङ्गी बजाउँदै आफ्नो दैनिकी चलाएका छन् । सारङ्गीको बजाउँदै जीवन चलाउने गन्धर्व समुदायमा पछिल्लो पुस्ताले बाबुबाजेको पेशालाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् ।
नेपाली गीत, संगीतमा छुट्टै महत्व राख्ने लोकबाजाको संरक्षणका लागि गन्धर्व समुदाय र वादी समुदायले मात्र नभई अन्य समुदाय र सरकारको पनि ध्यान पुग्न जरूरी हुन्छ ।
बाजाको महत्वबारे पछिल्लो पुस्तालाई बुझाउन नसकिएको कि ? बाजा बजाउनेप्रति सम्मान हुन नसकेको भन्ने प्रश्न पनि छ ? सरकारले लोप हुन लागेका लोकबाजाको संरक्षणका लागि नयाँ पुस्तालाई बाजाको महत्व बुझाउन सकेको छैन् ।
कला, संस्कृति बचाउनका लागि पनि यी बाजाको महत्वलाई नयाँ पुस्तामा बुझाउन जरूरी छ ।
सारङ्गीको संरक्षणका लागि तुलसीपुर–४ का रक्षाचौरका गन्धर्व समुदाय पनि लागेको छ । उनीहरूले सारङ्गीको महत्व विद्यालयस्तरबाट बुझाउनका लागि एक विद्यालय एक सारङ्गी भन्ने उद्देश्यका साथ अभियान चलाउन थालेका छन् । बाजाको महत्व नयाँ पुस्तामा लैजानका लागि गन्धर्व समुदायले थालेको यस्तो प्रयासलाई सफल तुल्याउनका लागि स्थानीय सरकारले पनि साथ दिनुपर्छ ।
सरकारले बाजा बजाउने र बनाउने दुबैलाई पहिचान दिएर संरक्षण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई बाजा बजाउने तालिमदेखि बाजा बनाउने तालिमको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ ।
समाजले पनि बाजा बजाउनेप्रति गर्ने व्यवहार र सोचलाई सकारात्मक बनाउनुपर्छ । बढ्दै गएको सूचना प्रविधिका कारण बाजाको लोप हुन थालेको एक किसिमले विश्लेषण गर्ने गरीन्छ तर त्यसो होइन् ।
सूचना प्रविधिमार्फत झनै बाजाको महत्वबारे बुझाउन अनिवार्य छ । पुरानो पुस्तालेमात्रै भन्दा पनि नयाँ पुरस्तामा पनि यो संरक्षण हुनुपर्छ । नयाँ पुस्तामा बाजाको महत्व बुझाउन र संरक्षणमा सबैको पहल जरूरी छ ।